Quotient စျေး - အွန်လိုင်း XQN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Quotient (XQN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Quotient (XQN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Quotient ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Quotient တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Quotient များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
QuotientXQN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00538QuotientXQN သို့ ယူရိုEUR€0.00457QuotientXQN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00412QuotientXQN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00491QuotientXQN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0487QuotientXQN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.034QuotientXQN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.12QuotientXQN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0202QuotientXQN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0072QuotientXQN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00752QuotientXQN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.121QuotientXQN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0417QuotientXQN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0293QuotientXQN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.404QuotientXQN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.907QuotientXQN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00738QuotientXQN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00815QuotientXQN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.168QuotientXQN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0375QuotientXQN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.569QuotientXQN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩6.4QuotientXQN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.08QuotientXQN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.397QuotientXQN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.149
QuotientXQN သို့ BitcoinBTC0.0000005 QuotientXQN သို့ EthereumETH0.00001 QuotientXQN သို့ LitecoinLTC0.00009 QuotientXQN သို့ DigitalCashDASH0.00005 QuotientXQN သို့ MoneroXMR0.00006 QuotientXQN သို့ NxtNXT0.397 QuotientXQN သို့ Ethereum ClassicETC0.000778 QuotientXQN သို့ DogecoinDOGE1.59 QuotientXQN သို့ ZCashZEC0.00006 QuotientXQN သို့ BitsharesBTS0.206 QuotientXQN သို့ DigiByteDGB0.184 QuotientXQN သို့ RippleXRP0.0186 QuotientXQN သို့ BitcoinDarkBTCD0.000183 QuotientXQN သို့ PeerCoinPPC0.018 QuotientXQN သို့ CraigsCoinCRAIG2.42 QuotientXQN သို့ BitstakeXBS0.227 QuotientXQN သို့ PayCoinXPY0.0927 QuotientXQN သို့ ProsperCoinPRC0.667 QuotientXQN သို့ YbCoinYBC0.000003 QuotientXQN သို့ DarkKushDANK1.7 QuotientXQN သို့ GiveCoinGIVE11.5 QuotientXQN သို့ KoboCoinKOBO1.2 QuotientXQN သို့ DarkTokenDT0.00495 QuotientXQN သို့ CETUS CoinCETI15.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Mon, 10 Aug 2020 00:05:02 +0000.